Nanambara ny vaovao ho hitantsika ao amin'ny Google I / O 2018 | Androidsis
Google I / O 2018 dia iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra eo amin'ny tontolon'ny teknolojia. Io ihany koa ny hetsika izay nanararaotan'i Google nanolotra ireo vokatra sy fivoarany vaovao. Noho izany dia hetsika iray izay miteraka fanantenana lehibe manerantany. Hatreto dia mbola tsy be ny antsipiriany fantatra. Na dia farany aza ny orinasa mihitsy no nanambara ny fandaharam-potoanan'ny hetsika.
Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mahafantatra ny vaovao hahafantarantsika ao amin'ny Google I / O 2018. Noho izany dia afaka miomana mialoha isika hianatra bebe kokoa momba ny zavatra hatolotry ny orinasa amintsika amin'ity volana Mey ity ao Mountain View.
Ny hetsika manandanja indrindra dia ny teny ifotony, izay ny kaonferansa miadidy ny fanokafana ny hetsika. Satria io dia mitovy amin'ilay anehoana ireo zava-baovao. Maharitra 90 minitra eo ho eo. Tombanana hitranga amin'ny 8 Mey amin'ny 19:2018 hariva ora Espaniôla. Aorian'izany dia miato ny fiatoana ary manomboka ny hetsika hafa an'ny Google I / O XNUMX.
Ny fotoana sisa amin'ny hetsika dia hatokana ho an'ny fivoriana ho an'ny mpamorona ary koa ny atrikasa kaody. Na dia handany fotoana kely ihany koa aza ilay fety tsindraindray. Mampanantena ny hampiditra kely ny zava-drehetra ho an'ireo izay manatrika izany ny hetsika.
Raha ny momba ny hetsika dia efa nametraka olana tamin'ny fandaharam-potoana i Google. Anisan'izy ireo no ahitantsika ny zava-misy mitombo sy virtoaly, doka, faharanitan-tsaina artifisialy, Nest ary maro hafa. Na dia tokony holazaina koa aza fa hisy hetsika Android Wear, iray hafa ho an'ny Chrome OS ary iray hafa ho an'ny Google Assistant. Ka hisy ny zava-drehetra amin'ity Google I / O 2018 ity.
Tsy fantatra amin'izao fotoana izao raha toa ka ireo daholo ny hetsika hitranga mandritra ireo andro ireo. Na dia vitsivitsy aza no azo ampiana mandritra ny herinandro vitsivitsy. Amin'izao fotoana izao, ny zava-dehibe dia ny fanamarihantsika ny datin'ity Google I / O 2018 ity hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 10 Mey tao Mountain View.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny vaovao rehetra izay ho hitantsika ao amin'ny Google I / O 2018
Hangouts Chat: ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao ho an'ireo orinasa efa ao amin'ny Play Store